Farmaajo oo soo saaray Xeer Xukuumadda looga joojinayo inay gasho Heshiisyo xilligan.. (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Farmaajo oo soo saaray Xeer Xukuumadda looga joojinayo inay gasho Heshiisyo xilligan.. (Akhriso)
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray xeer Madaxweyne oo uu ku joojinayo in Hay’adaha Dowladdu ay galaan heshiis ama is af-garad kasta oo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka.
Qoraal kasoo baxay Caawa Madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Maxamed Farmaajo oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka, waajibaadka dastuuriga ah ee Goleyaasha Barlamaanka oo leh hubinta, xaqiijinta iyo qiimeynta heshiisyada iyo is-afgaradyada dalkeenna uu la galayo dalalka kale, hay’adaha iyo shirkadaha caalamiga ayaa soo saaray qodobbadan:
2. Waxaa reebban, ilaa doorashada keddib, in Wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee Dowladda ay magaca Dowladda Federaalka Soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wadahadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madax bannaanida qaranka, seeraha dhuleed iyo badeed ee dalkeenna.
Arrintan ayaa kusoo beegmeysa iyadoo Berri lagu wado inay magaalada Muqdisho timaado Wasiiiradda arrimaha dibadda dalka Kenya oo warar kala duwan kasoo baxeen socdaalkeeda; waxayna wareegtadan si toos ah u taabaneysaa Ra’iisal wasaare Rooble oo la sheegay inuu casuumay wafdiga Kenya, kuna sii jeeday dalkaasi.
Farmaajo ayaa hore u diiday inuusoo saaro qoraal uu ku xadiddayo awoodihiisa sida magacaabista xilalka, dalacsiinta iyo awoodaha madaxweynaha kadib markii uu dhammaaday xilligiisa oo ku ekaa 8 Febraayo 2021.
Previous articleTaliyaha Ciidamada Dhulka Jen. Biixi oo ka Badbaaday Qarax lala beegsaday Gaadiiid uu la socday
Next articleMahad Salaad: “Farmaajo wuxuu Siyaasadda dalka marti uga yahay Ra’iisul Wasaare Rooble..”!